China China factory 5052 PVDF agba ntekwasa aluminum eriri igwe ọkpụrụkpụ 0.7mm emepụta na suppliers | Huifeng
Agba ntekwasa aluminum eriri igwe
A na-eji aluminom na-acha (aluminium na-acha uhie uhie), a na-ejikarị polyester na-ekpuchi aluminom (eriri igwe aluminium), na-ejikarị ya eme ihe na mmanụ a honeyụ nke mmanụ a ceụ, ụlọ elu aluminom, elu ụlọ, na ihe ndị fọdụrụ. Omume ya na-akwụsi ike, ọ dịghịkwa mfe ịla n'iyi. Dị ihe ọhụrụ.
Nkọwapụta nke eriri igwe aluminom
Iwe: H32 H24 H16 H18 O H111 H112 T3 T351 T4 T42 T6 T651
Obosara nke CC 100-1700mm
Ogologo: eriri igwe
N'elu ọgwụgwọ: Mill imecha, embossing, anodized, agba mkpuchi, Polishing
A na-ekewa mkpuchi mkpuchi aluminom na agba na: polyester ntekwasa aluminom (PE), fluorocarbon coated aluminum coil (PVDF). Ihe mkpuchi polyester nke e guzobere site na mmiri nke efere aluminom ọtụtụ ugboro nwere ike ịmalite adhesion na-aga n'ihu ma sie ike. Ihe nkiri siri ike nwere ihe ịchọ mma eji achọ mma. Ọ bụ ihe mgbochi UV mkpuchi. The polyester resin na-eji ester bond-nwere nnukwu molekụla polymer na isi yinye dị ka monomer, na alkyd resin na-agbakwunye. Enwere ike kewaa ultraviolet absorber n'ime usoro glo-gloss na gloss dị ka gloss. Ọ nwere ike ịnye ọgaranya n'ụba na ngwaahịa aluminom, ma nwee ọfụma na ịdị mma, yana ederede na mmetụta dị elu, yana nwekwara ike ịbawanye n'echiche nke ịtọ akwa na akụkụ atọ. Ọ nwere ike ichekwa ihe site na ikpughere ikuku na ikuku ultraviolet, ikuku, mmiri ozuzo, ntu oyi, snow na oyi; mkpuchi ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nchebe n'ihi esemokwu ọnọdụ okpomọkụ, oge ịgbaze oyi, ikuku na-emebi emebi na microorganisms. Karịsịa dabara maka ime mma na bọọdụ mgbasa ozi
Fluorocarbon ntekwasa Agba ntekwasa Aluminium eriri igwe (PVDF)
Ihe mkpuchi Fluorocarbon bụ PVDF resin tumadi na-ezo aka na mkpuchi nke vinylidene fluoride homopolymer ma ọ bụ copolymer nke vinylidene fluoride na ndị ọzọ pere mpe nke nwere vinyl monomers nwere fluorine. A na-ejikọta usoro ihe eji arụ ọrụ nke fluoric acid base yana njikọ nke fluorine / carbon. Nkwụsi ike na nkwụsi ike nke usoro kemịkal a na-eme ka ọdịdị anụ ahụ nke mkpuchi fluorocarbon dị iche na mkpuchi nkịtị. Na mgbakwunye na ihe ndị na-arụ ọrụ nke nkwụsị, mmetụta nkwụsị nwere arụmọrụ dị mma, karịsịa na ihu igwe siri ike na gburugburu ebe obibi na-egosi nkwụsị na-adịte aka, arụmọrụ ultraviolet. Mgbe emechara ya na elu okpomọkụ iji mepụta ihe nkiri, usoro ihe omimi dị na mkpuchi ahụ siri ike ma nwee nnukwu nguzogide ihu igwe. Enwere ike ekewa mkpuchi fluorocarbon na fluorocarbon ọdịnala na nano fluorocarbon mkpuchi dịka nhazi usoro ihe nkiri dị n'elu.
Ihe mkpuchi aluminom na-acha agba nwere ọtụtụ agba agba, ma ọ bụ maka ebe obibi obodo, nnukwu ụlọ ahịa azụmahịa ma ọ bụ ebe a na-egosipụta ihe ngosi, ihe mkpuchi alumini nwere agba nwere ike ịgbakwunye ya. Ezi plastic na ịkpụzi akụrụngwa na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe maka ụdị ụlọ dị iche iche. Ihe mkpuchi alumini na-acha agba agba agbapụtawo ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ndị na-ese ihe na ndị nwe ya na agba nwere ahaziri iche maka mgbidi na elu ụlọ, ma bụrụkwa ezigbo ihe kachasị mma maka ịme ngosi ihe owuwu. Ma ọ bụ nnukwu ụlọ buru ibu na-arụ ọtụtụ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọhụrụ na-emepụta ihe pụrụ iche na nke okike, ihe mkpuchi aluminom na-acha agba nwere ike mgbe niile izute ihe dị iche iche chọrọ nke ụdị ụlọ ọgbara ọhụrụ na nke oge gboo, na-eme ka ụlọ ahụ dịkwuo mma. A na-eji ngwaahịa eme ihe n'ọtụtụ ubi dịka ngwa elektrọnik, ngwa ọrụ, ọkụ, nkwakọ ngwaahịa, mma ụlọ na ihe ndị ọzọ.
Ngwaahịa a na-eji ọtụtụ dịgasị iche iche: ụlọ (aluminom mejupụtara aluminium, ụgbụgbọ mmanụ a aluminumụ, ụlọ a na-agbanye ọkụ, mkpuchi ọkụ, mkpuchi aluminom, mkpuchi, ọnụ ụzọ na-apụ apụ, ụzọ ụgbọala, windo, gutter), ngwa elektrọnik (ikpe kọmputa, ogwe ọkụ), Lighting, arịa ụlọ, anyanwụ reflectors, ntụ oyi duct, wdg
Nke gara aga: Corrugated mpempe akwụkwọ metal mkpuchi aluminom mpempe akwụkwọ corrugated aluminum Ibé akwụkwọ
Osote: Ezi aha extruded alloy 6061 6082 5083 2024 7075 gburugburu aluminum mmanya
anodized aluminum eriri igwe
Pee ntekwasa aluminum eriri igwe
PVDF aluminum eriri igwe
Aluminom warara / coils 1000series, 3000series, 50 ...